Adina mpivady sinoa…: nipoaka ny basy tetsy amin’ny Suprême Center | NewsMada
Adina mpivady sinoa…: nipoaka ny basy tetsy amin’ny Suprême Center
Asa, inona loatra no fototry ny ady nampifandramatra ireto mpivady sinoa, tetsy amin’ny Supreme Center, Behoririka, omaly, fa niafara tamin’ny poa-basy nampisahotaka ny maro izany.
Hatairana ny an’ireo mpivarotra sy mpiantsena tao amin’ny suprême center Behoririka, omaly maraina tamin’ny 9 ora, raha nandre poa-basy nirefotra tao amin’ity toeram-pivarotana ity. Tsy fantatra mazava ny toerana niaingan’ilay poa-basy fa ny basy efa nirefotra nanako tao an-trano fotsiny no nahataitra ireo mpivarotra sy mpiantsena. Raikitra ny fifanjevoana ka samy nikoropaka nivoaka teny ivelan’ity toeram-pivarotana ity ny ankamaroan’ireo mpivarotra. Nisy kosa nanidy tsena haingana satria nihevitra fa hoe misy andian-jiolahy tonga manao fanafihana ao amin’ilay toeram-pivarotana. Samy nifampihainohaino teo ivelan’ny toeram-pivarotana ireo mpivarotra. Vetivety taorian’izay, vory lanona marobe ireo mpivarotra sy olona samy nifanontany ny zava-nitranga tao an-toerana. Fifanjevoana tsy nisy toy izany teo amin’ireo olona marobe tsy nanampo na inona na inona taorian’ny fahenoana ilay poa-basy. Araka ny fanazavan’ny sasany tamin’ireo mpiasa ao amin’ny suprême center nahita ny zava-nitranga tao an-toerana, misy sinoa mpivady niady tao amin’ity toeram-pivarotana ity ka nanapoaka basy ilay sinoa lahy. Manana botika ao amin’ity toeram-pivarotana lehibe ity izy mivady ireto, saingy tsy fantatra mazava izay zava-nitranga fa hoe niady izy mivady ka niafara tamin’ny poa-basy.
Nifanilika ny polisy…
Fotoana fohy taorian’izay, tonga teny an-toerana ny hery vonjitaitran’ny polisim-pirenena, nampian’ny avy ao amin’ny kaomisaria boriborintany fahatelo ary ny polisy misahana ny heloka bevava nanao fanadihadiana ny zava-nitranga tao an-toerana. Navoaka avokoa ny mpivarotra sy ireo olona nifamezivezy tao amin’ny suprême center. Tsy nahazoam-baovao marim-pototra raha nanontaniana nikasika ity fahenoana poa-basy tao amin’ity toeram-pivarotana ity ny teo anivon’ny polisim-pirenena. Nanontaniana ireo polisy avy ao amin’ny kaomisaria boriborintany fahatelo dia nanilika andraikitra hoe any amin’ny polisy misahana ny heloka bevava (BC) ny vaovao rehetra momba ity zava-nitranga tao amin’ny suprême center ity. Nanontaniana indray teo anivon’ny polisin’ny BC, tsy nety niteny ary nanililka andraikitra tany amin’ny polisy avy ao amin’ny boriborintany fahatelo Antaninandro fa hoe any amin’izy ireo ny vaovao momba izany. Inona ny tena marina amin’ity raharaha ity? Misy zavatra afenimpenina?
Inona ny zava-nitranga raha niantefa tany amin’ny mpivarotra na mpiantsena ny balan’ireto sinoa mpivady niady ireto? Toerana ifamezivezen’olona marobe rahateo ny ao amin’ity toeram-pivarotana ity. Soa ihany fa tsy nisy ny olona niantefan’ny bala fa raha tsy izany zava-doza no nitranga. Ara-dalàna ny fahazoan-dalana mitondra fitaovam-piadiana teo amin’ireo sinoa ireo? Andrasana, araka izany, ny tohin’ny fanadihadiana momba ity raharaha ity.